वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना रहरमै सीमित हुने, सचिवालय बैठकमा कुरै नउठेको खुलासा - Canada Nepal-Nepal's Digital Online
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्रै चलखेल गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाएका छन् । ओलीको पद टिकेसँगै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना रहरमै सीमित हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए । जसका कारण नेकपाको समीकरण उल्टिएको थियो ।
वामदेवलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए । उनकै डिजाइनअनुसार वामदेवले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मागेका थिए । गौतमको यो व्यवहारबाट क्रूद्ध ओलीले अन्ततः उनलाई प्रचण्ड खेमाबाटै अलग्याइदिए ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयबारे अन्तिमसम्म पनि कुरा नउठेको बताइएको छ । सबै नेताले पार्टीमा देखिएको विवादबारे बोलेपछि बैठक सकिएको थियो । नेताहरूका अनुसार अन्तिममा ‘उपयुक्त समयमा’ वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय भएको थियो । तर, त्यो ‘उपयुक्त समय’ कहिले भन्ने कुनै छलफल नै भएको छैन ।
पहिलो बैठकमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका ओलीले शनिबारको बैठकमा कुरै नउठाउनुले वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना यसपटक पनि रहरमै सीमित हुने देखिएको हो । किनभने वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा नल्याई उनी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन पाउँदैनन् । वामदेवलाई सांसद बनाएर ओली आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न चाहँदैनन् भन्ने तथ्य त उनले एक साताको बीचमा देखाएको सक्रियताले पुष्टि गरेको छ ।
बैशाख २१, २०७७ आइतवार १३:१०:३३ बजे : प्रकाशित
सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार वसुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार सुशान्त को टेस्ट समाचार वव
आषाढ १४, २०७७ आइतवार १७:१९:३१ बजे : प्रकाशित
बैशाख २१, २०७७ आइतवार १४:३९:१२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याइदिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद सृजना गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन सो अध्यादेश ल्याएको आरोप लागिरहेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको राजनीतिक टकरावका कारण पनि सो अध्यादेश ल्याइएको बताइयो । प्रचण्डको ओलीविरुद्धको रणनीतिलाई असफल बनाउन अध्यादेश ल्याइएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । यी अनुमान र टिप्पणीकाबीच बुधबार नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँगै बसेर आफ्ना संघीय सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
उक्त अध्यादेशबारे फैलिएको भ्रम चिर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा संघीय सांसदलाई स्पष्ट पार्न छलफलको आयोजना गरेका हुन् । उक्त छलफलमा सहभागी हुन प्रचण्डलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले प्रदेशगत सांसदसँग छलफल गरे । काठमाडौंमा उपलब्ध आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई बालुवाटार डाकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुदुरपश्चिमका सांसदहरूबाट छलफल सुरु गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले जारी गरिएका दुई अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । सांसदहरुले पनि पार्टी एकतामा जोड दिँदै अध्यादेशको औचित्यबारे प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरुबाट उठेको प्रश्नको जवाफ र जिज्ञासा मेटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो कसरत गरे । अध्यक्ष ओलीले अध्यादेशले पार्टी विभाजन नगर्ने भन्दै थप बलियो र एकताका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकीर गरे । पार्टी फुट्न नदिने ओलीले बचन पनि दिए ।
बैशाख १०, २०७७ बुधवार १७:५२:१२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं – महोत्तरीमा एक व्यक्तिमाथि गोली प्रहार भएको छ । मनरासिसवा नगरपालिका–३, का स्थानीय सहदेवप्रसाद यादवमाथि गोली प्रहार भएको हाे।
महोत्तरीका डीएसपी माधव बुढाथोकीले घटनाको पुष्टि गर्दै यादवको छातीमुनि गोली लागेको बताए । उनका अनुसार आइतबार बिहान २ बजे गाेली प्रहार भएकाे हाे । गाेली लागेर यादव घाइते भएका छन् ।
चैत्र २५, २०७६ मंगलवार २१:१३:५४ बजे : प्रकाशित
एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गरिदिन घरबेटीलाई सरकारको अनुरोध
काठमाडाैँ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्ने मजदुर र कामदारको राहतको लागि एक महिनाको घरबहाल मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शहरी क्षेत्रमा रहेका घरमा एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सरकरका प्रवक्ता समेत सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई विद्यार्थीको आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
चैत्र १७, २०७६ सोमवार ११:३५:४३ बजे : प्रकाशित
# युवराज खतिवडा
कोरोनाका नाममा घोटाला, मन्त्री ढकाललाई अख्तियारले छानविन गर्ला ?
काठमाडौं। नेपाल सरकारले चीनबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी सामाग्री खरिद गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोविड–१९) को संक्रमण सुरु भएको ३ महिनासम्म पनि सरकारले किट्स, मास्क, पीपीई, ग्लोब जस्ता अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद गर्न आवश्यक नठानेको सरकारले बल्ल आवश्यक सामाग्री त किन्यो तर, करोडौं भ्रष्टाचार गरेर ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मेडिकल उपकरण सप्लायर्सहरुको बैठक नै राखेर कसरी कमिसन मिलाउन सकिन्छ भनेर निर्णय नै गराएको स्रोतका दावी छ ।
त्यसैले सरकारले किनेको उक्त स्वास्थ्य उपकरणको मूल्य बजार भाउभन्दा दशौं गुणा महंगो परेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले किन यति महंगोमा सामान किन्यो त ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला मन्त्रीपरिषद्मा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ ।
कुन सामान कति कमिसन ?
नेपाल सरकारले खरिद गरेका गगल्सको मूल्य १८ डलर परेको छ । जबकी यो गगल्सको मूल्य चिनियाँ बजारमा न्यूनतम २ डलरदेखि अधिकतम ४ डलरसम्म पर्छ । एक लाख थान गगल्स किन्दा सरकारले १७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी एफडीए सर्टिफाइड थर्मोमिटरको अधिकतम बजारमूल्य २९ देखि ३३ डलर पर्नेमा नेपाल सरकारले ६५ डलरमा खरिद गरेको छ । १५ सय थान थर्मोमिटरमा ७१ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बिल देखाइएको देख्रिन्छ ।
त्यसो त एक सेन्ट पनि नपर्ने डिस्पोजेवल जुत्तालाई नेपाल सरकारले २ डलर तिरेको छ भने २.५ डलर पर्ने रेस्पिरेटर मास्कलाई ७ डलर तिरेको छ । यसमा पनि लाखौं रकम बढि तिरिएको छ ।
कोरोना परीक्षणका लागि पोर्टेबल पीसीआर टेस्टिङ किट ५० हजार थान खरीद गरिएको छ । प्रतिकिट ३८ डलरमा खरीद गरिएको छ । यसको अधिकतम मूल्य ९–१० डलर भन्दा बढी नपर्ने चिनियाँ व्यापारीहरुले बताइसकेका छन् ।
यसमा मात्रै १६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बिल देखाइएको छ ।
चीनबाट खरिद गरिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको भनेर चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठ्दा समेत सरकारले अझैसम्म जवाफ दिन सकेको छैन । कोरोना भाइरस जस्तो महामारीको समयमा करोडौं स्वास्थ्यमन्त्रीसम्म मिलेर कमिसन खाँदा समेत प्रधानमन्त्री भने अझै चुप नै छन् ।
मेडिकल सामाग्री खरिदमा करोडौ अनियमितताको कुरा छताछुल्ल भएपछि मन्त्री ढकाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्तै कागजात झिकाएर अनुसन्धान गर्नु पर्ने आवाज पनि सामाजिक सञ्जालभरी उठेको छ।
चैत्र १७, २०७६ सोमवार ११:१७:०३ बजे : प्रकाशित